AMISOM: Col Xumud nooma aha Afhayeen! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: War kasoo baxay Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaalia (AMISOM) ayaa lagu sheegay in Col. Cali Aadan Xumud oo ahaa Afhayeenka AMISOM uusan haatan wixii ka dambeeya ku hadli karin magfaca ciidamadaas.
Qoraal ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in Cali Aadan wixii hada kadib oo uu sheego ay isaga u gaaryihiin, isla markaana aanay ka turjumeyn warkiisa mowqifka AMISOM.
AMISOM ayaa sheegtay ineyiska fogeyneyso war kastoo ka soo baxa Col. Cali Aadan Xumad, ayna beri ka tahay.
Ma sheegin AMISOM sababta degdega ah ee ay shaqada uga joojiyeen Col. Xumud, hase ahaatee arrintaan ayaa kusoo beegantay kadib markii khamiistii Alshabaab weerar ku qaaden xarrunta AMISOM ee Xalane, iyadoo weerarkaas lasoo afjaray shalay suba jimcihii.
Col. Xumud ayaa la sheegay inuu siyaabo kala duwan ula hadlay wakaaladaha Wararka, waxaana arrintaas dhibsaday howlgalka AMISOM.